Suuriyaanka oo Iswiidhen ku soo gala ruqsooyin shaqo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Kate Brooks/Scanpix.
Suuriyaanka oo Iswiidhen ku soo gala ruqsooyin shaqo
La daabacay tisdag 20 augusti 2013 kl 10.03
Codsiga ruqsadda shaqada ayaa noqday hab cusub oo ay dad badan oo Suuriyaan ah doonayaan in ay Iswiidhen ku soo galaan.
Dad gaaraya boqolkiiba 55 oo ka mid ahaa 419 qof oo Iswiidhen ku soo galay ruqsadda shaqada ayaa markii ay dalka soo galeen isdhiibey oo codsaday magangelyo. Tiradaasna waxay ku qornayd qoraal uu wargeyska Dagens Nyheter ka helay Hay’adda Socdaalka.
Waqtigaan xaadirka ah dadka suuriyaanka ah oo magangelyada ka codsada Iswiidhen waxay u badan yihiin dad markii hore ku galay dalka iyagoo haysta ruqsad shaqo.
Baaritaan uu wargeyska DN ku sameeyey afar shirkadood oo shaqaale ka soo waarida dalka Suuriya, waxaa ka muuqda in dadkaas loo soo kaxeeyo shaqooyin aan jirin. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa Hay’adda Socdaalka soo gaaray codsiyo lagu dalbanayo ruqsadda shaqada oo ay soo gudbiyeen shan oo shaqo-doon ah iyo 15 qof oo qoys ahaan u soo raaca. Bilowgii xilligaan ayey dhammaan qoysaskaan yimaadeen Iswiidhen. Laba maalmood kadibna waxay soo gudbiyeen codsiyo ay magangelyo ku doonayaan. Sida ku cad warar uu wargeyska DN soo xigtey ma jiro qof dadkaas ka mid ah oo shaqo bilaabey ama ku talajira in uu shaqeeyo.
Mikael Ribbenvik oo ah kusimaha agaasimaha guud ee Hay’adda Socdaalka ayaa DN u sheegay in hadda baaritaan lagu hayo shirkadaha dadka ka soo waarida dalka Suuriya.
Dhanka kale, Hay’adda Socdaalka guud ahaan ma ogaan karto haddii dadkaas ruqsadda shaqada ku yimid ay shaqeeyaan kolka ay halkaan yimaadaan, maadaama aysan ahayn hay’ad wax kontaroosha.
Qofkii doonaya in uu magangelyo ka codsado Iswiidhen waa in uu marka hore dalka soo gala oo codsigiisa magangelyada soo gudbiyaa isagoo dalka jooga. Si uu dalka ku soo galana waa in uu haystaa fiiso ama dal-ku-gal. Balse sida ku qoran xeerka Schengen, wax fiiso ah lama siiyo muwaadiniinta Suuriya.